जनतालाई ऐन नेतालाई चैन, नेताज्यू ?जनतालाई के उत्तर दिनुहुन्छ ? -
जनतालाई ऐन नेतालाई चैन, नेताज्यू ?जनतालाई के उत्तर दिनुहुन्छ ?
१२ जेठ,काठमाडौं-कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। मृ,त्युको संख्या पनि घट्न सकेको छैन। निषेधाज्ञाको अवधि थपिँदो छ। सरकारले यसलाई झन् कडा बनाउँदै लगेको छ। अक्सिन र भेन्टिलेटरको अभावमा संक्रमितहरूले पर्याप्त उपचार पाइरहेका छैनन्। फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतले आफ्नो र परिवारको भन्दा संक्रमितहरूको जीवनरक्षा गर्न ज्यान जोखिममा पारेका छन्। यस्तो बेला समाजको अगुवा बन्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले मान्छे भेला पार्दै विरोध र स्वागतका कार्यक्रमहरू निर्वाध गर्न थालेका छन्। नेताहरूकै अगुवाइमा निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्दै विभिन्न ठाउँमा हुल बाँधेर भेला, बैठक, विरोध प्रदर्शन र स्वागत कार्यक्रम हुन थालेका छन्। कोरोनाको विषम परिस्थितिमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढेको छ। कतै दुई त कतै तीन सातादेखि सुनसान रहेको बजारहरूमा तीन दिनयता राजनीतिक चहलपहल हुन थालेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरु,द्ध रिट लिएर सोमबार हजारौंको संख्या सर्वोच्च अदालत गयो। निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको सजाय तोक्ने निकाय पनि त्यही हो। अदालतमा जान पाइन्छ तर सुरक्षा मापदण्ड पालना हुनुपर्छ। जनकपुर, भक्तपुर, हेटौँडा, रौतहट, उदयपुर, राजविराजलगायतका ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव समर्थित जसपा नेपालका कार्यकर्ताहरू तथा तरुण दल र वाईसीएल नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रदर्शन, मसाल जुलुस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेका छन्।
अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०७८ जारी गरेपछि प्रदेश २ का सबै जिल्लामा दीपावली गरिएको छ। नेकपा ९एमाले०, महन्थ ठाकुर समर्थित जसपा कार्यकर्ता र जनमत पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले अध्यादेशको स्वागतमा चोक, पार्टी कार्यालयमा र नागरिकहरूले घर–घरमा दीपावली गरेका छन्। त्यस क्रममा पनि सुरक्षा मापदण्ड पूर्णतः उल्लंघन गरिएको छ।
‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान तथा बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिने मधेसको मूल माग सम्बोधन भएकाले अध्यादेशको स्वागत गरिएको जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवको भनाइ छ। नि,षेध आदेशको उल्लंघन गर्दै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेपछि सर्वसाधारणमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। सप्तरीका पञ्चदेव खंगले कोरोना महामारीविरुद्ध एकजुट हुन नसक्ने तथा अक्सिजन र भेन्टिलेटरका लागि बोल्न नसक्ने नेताहरूको बेतुकको प्रदर्शनले घर–घरमा कोरोना फैलिने आरोप लगाए।
नेताहरूकै कारण बिहान र साँझ सडक र खुला मैदानमा फाट्टफुट्ट मानिसहरू देखिन थालेका छन्। प्रहरीहरूले रोक्न खोज्दा पनि समूहमा जुलुस लगाउने नेताहरूलाई रोक्न नसक्ने हामी एक्ला–एक्लै हिँडनेलाई रोक्न आउने भनेर मुखभरिको जवाफ दिने गरेको प्रहरीको दुखेसो छ। अझै नेताहरूले गौरवका साथ विभिन्न ठाउँमा गरेको स्वागत र विरोध कार्यक्रमका तस्बिरहरू फेसबुक, ट्वीटरमा पोस्ट गरिरहेका छन्। यी सबै क्रियाकलापलाई बेतुकको बाजा बताउँदै राजविराजका शिक्षक गिरीराज पौडेलले भने–‘देशलाई यत्रो ठूलो कोरोना महामारीले घेरेको छ। देशलाई यो संकटबाट उन्मुक्ति दिनेभन्दा पनि कसरी सत्ता कब्जा गर्ने खेलमा राजनीतिक दलहरू लागेका छन्।’
अगुवाबाटै निषेधाज्ञा उल्लंघन
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार दिएको जानकारीअनुसार २४ घण्टामा देशभर ८ हजार ६ सय ३६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच लाख २८ हजार ८ सय ४८ पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या एक लाख १७ हजार २ सय ६१ पुगेको छ। यस्तै २४ घण्टामा कोरोनाले १ सय ६९ जनाको मृत्यु हुँदा कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या ६ हजार ७ सय पुगेको छ। यति ठूलो संख्यामा नयाँ कोरोना संक्रमित पुष्टि भइरहेको छ र मृत्युको संख्या पनि बढेको छ। यसैबेला सामाजिक सञ्जालमा पोस्टिएका तस्बिर, समाचार र राजनीतिक दलका क्रियाकलापले समुदायस्तरमै संक्रमण तीव्र भइरहेको यथार्थलाई भने व्यंग्य गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमाथि कैद र जरिवानाको प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भन्दै स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएको छ। जिल्ला–जिल्लामा संकट व्यवस्थापन केन्द्र, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै सार्वजनिक भेला र कार्यक्रम गर्न लगाएको रोकको अवज्ञा गर्दै गरिएको यस्ता कार्यक्रममा केन्द्रीय स्तरका नेताहरू सहभागी छन्। निषेधाज्ञाको निर्णय गर्ने बैठकहरूमा सहभागी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र नेताहरू नै विरोध र स्वागतका कार्यक्रममा सहभागी देखिएका छन्।
कार्यक्रममा कतिपयले मास्क चिउँडोमुनि लगाएको देखिन्छ। कार्यक्रममा सामाजिक दूरी कायम गरिएको छैन। कोरोना संक्रमणका बेला भेला, स्वागत, विरोध प्रदर्शन गरेर विजयी भावमा पोष्ट्याएको तस्बिर र समाचारमा दर्जनौंले तिखो प्रश्न गरेका छन्। संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वैठकमा नगई अध्यादेशको स्वागत कार्यक्रमको अगुवाई गरेका जिसस सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले पोस्ट्याएको तस्विरमा रमानन्द यादवले चिउँडोमा मास्क लगाएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नुलाई जनताले के रूपमा बुझ्लान भनेर प्रश्न गरेका छन्। स्वागत, विरोध तथा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार संसद पुनस्र्थापनाका लागि उजुरी दर्ता गर्न जाँदाका तस्बिरहरू मात्रै हेर्ने हो भने सामाजिक दूरी र अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन। बढ्दो कोरोना संक्रमणको विस्तारको ख्याल नगरी र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी गतिविधि गर्नेमा विपक्षीसँगै सरकार समर्थित दलका नेताहरू पनि अछुतो छैनन्।अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको छ ।
सामाजिक दूरी कायम नगरी, स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई भीडभाडयुक्त शैलीमा राजनीतिक गतिविधिहरू गर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन्। ‘विरोध होस् वा समर्थन अथवा अन्य गतिविधि गर्दा भीडभाडले कोरोना संक्रमण फैलाउन मद्दत गर्ने भएकाले अन्य उपाय अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, पोखरेलको भनाइ छ।
Previous प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको समाचार लेख्ने पत्रकार माथि खनियो सर्वोच्च अदालत
Next अगुवाबाटै निषेधाज्ञा उल्लंघन,सर्वसाधारणलाई उल्लंघन गर्दा जरि,वाना